Dubai: Madaxweyne Farmaajo oo Gaaray Magaaladda Abu-Dubai - Wargane News
Home Somali News Dubai: Madaxweyne Farmaajo oo Gaaray Magaaladda Abu-Dubai
Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wefti ballaaran oo uu hoggaaminayo ayaa xalay fiidkii ka degay magaaladda Abu-dubai ee xarunta Imaraadka carabta, halkaasi oo si weyn loogu soo dhaweeyay.
Madaxweynaha ayaa lagu wadaa inuu wada hadallo la yeesho Madaxweynaha Isu-taga Imaraadka carabta, Shiikh Mohamed bin Zaayed Ala Nahyan, iyadoo dalkaasi uu uu ka furmayo maalinta isniinta wadahadalada rasmiga ah ee madaxda labada dowladood.
Waftiga madaxweynaha oo ka kooban Wasiiro ka tirsan xukuumadda khayre iyo xubno ka tirsan Barlamaanka Federaalka ayaa casuumad rasmi ka helay dowladda imaraadka carabta, waxaana wadahalada xooga lagu saari doono xiriirka ka dhexeeya labada dowladood iyo horumarinta iskaashiga dhinacyada dhaqaalaha iyo amniga geeska afrika.
Dhinaca kale, Madaxweynaha Soomaaliya ayaa dowladda masar iyo shacabkeeda uga tacsiyeeyay dadkii shalay ku dhintay labo qarax oo mataano ah oo lala beegsaday lab kaniisadood oo ku yaala magaalooyinka Tana iyo Alexsenderia, waxaana ku dhintay 45 qof.
Gabagabadii, Safarka Madaxweynaha ee dalka imaraadka ayaa ku soo aadaya, iyadoo barlamaanka federaalka uu mooshin ka keenay heshiiskii saldhiga milateri ee Imaraadku ka dhisayo dekeda berbera ee Somaliland iyo sidoo kale heshiiskii toddobaadkii hore ay wada gaareen Puntland iyo Shirkadda DP World.